BYTEMARK ayaa deeq wax ku ool ah ka sameysay mashruuca Debian | Laga soo bilaabo Linux
BYTEMARK waxay tabarucaad muhiim ah u samaysay mashruuca Debian
Mashruuca Debian ayaa ku dhawaaqay in Calaamadda summada waxay ku deeqday 16 server Daab HP leh qaabab kaydinta qaybsan oo leh 57TB oo kayd ah. Server-kan cusub ayaa ku yaalo xarunta cusub ee loo yaqaan 'Bytemark' ee DataCenter oo ku taal magaalada York ee dalka England waxaana lagu qiimeeyaa ganacsi ahaan at 150,000 sanadkii.
Calaamadda summada waxay ku saleeyeen adeegyaasheeda Debian tan iyo markii ay shaqeysay 2002, wax ay ku andacoodaan wuxuu had iyo jeer ahaa heshiis wanaagsan.
Tilmaamahan wuxuu isku dayay inuu wax ku celiyo Debian, marka lagu daro kafaala qaadka DebConf oo aad bilowdid xirmo kuu gaar ah «waraabowga»Si aad u qabato hawlaha martigelinta Debian ka fudud.
Ma magdhabi karno dadaalka kumanaan kun oo tabarucayaal Debian ah, laakiin waxaan ugu yaraan ku faani karnaa inaan bixino qayb muhiim ah oo ka mid ah kaabayaashooda.
Ku deeqidani waxay u oggolaan doontaa kooxda maamulka Debian inay si fiican u bixiyaan juqraafi ahaan adeegyadooda, ayna wanaajiyaan dulqaadkooda iyo helitaankooda. Kaydinta dheeriga ah ayaa sidoo kale xallin doonta dhibaatooyinka awooda, maaddaama adeegyo badan oo kaydinta degdegga ah loo wareejin doono server-yada Bytemark oo qayb ka ah geeddi-socodka is-dhexgalka. Faahfaahinta hawshan waxaa laga heli karaa liiska dirista Debian.
Qalab ay ku deeqeen Calaamadda summada wuxuu ka kooban yahay HP C7000 BladeSystem ka kooban 16 server daab:
12 BL495cG5 oo leh 2x Opteron 2347 iyo 64GB oo RAM ah midkiiba
4 BL465cG7 oo leh 2x Opteron 6100 iyo 128GB oo RAM ah midkiiba
Iyo iskudhafyo badan oo kaydinta HP ah:
6 Khaanadaha balaadhinta ee MSA2000
Iyadoo wadarta 108 wadarta kaydinta, tiro badan oo 500GB SATA ah, qaar 2TB ah, 600GB 15000 RPM SAS ah oo badan, wadar ahaan 57TB oo keyd ah.
Maanta awooddani waxay u dhigantaa qiyaastii 80 jeer tan hadda jirta ee Debian ama 3 jeer kaydka sawirka isla markiiba. Laakiin waa inaanan ilaawin in labada feylalba ay marwalba kujiraan koritaan joogto ah.
source: gelinno | Waxaa laga soo qaatay liistada Boostada ee GUTL
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » BYTEMARK waxay tabarucaad muhiim ah u samaysay mashruuca Debian
45 faallooyin, ka tag taada
Micno malahan isticmaalka Spanglish, haddii ereygu horeyba ugu jiray afkeenna.
Hadday ku jirto qaamuuska af Isbaanishka, waa nadiif Isbaanish.
Qodobka la soo jeediyay in la tirtiro.
Hordhaca daabacaadda saddex iyo labaatanaad
kafaala -ra. 1. '[Qof ama hay'ad] taakuleysa ama maalgelinaysa waxqabad, badanaa ujeeddooyinka xayeysiinta': «Waxaa sidoo kale jiray kafaala-qaadayaal yaryar oo gacan ka geystay […] in mashruuca la fulin karo» (Torres Conquista [Mex. 1990]). Jiritaanka codkan Isbaanishka ah wuxuu ka dhigayaa adeegsiga isboonsar Ingriis iyo la qabsashadiisa kafaala-qaade mid aan loo baahnayn. Si la mid ah kuwa aan badnayn waa soosaarayaasha (e) sponsorizar iyo (e) sponsorización, oo dhaqankooda u dhigma ee Isbaanishka ay kafaala qaadayaan oo ay kafaala qaadayaan
2. Wadamo badan oo Mareykan ah waxaa loo adeegsadaa ereyada isboonsar, kafaala-qaade iyo fidin, si isku mid ah u ansax ah oo loo doorbido Anglicism: "Xisbi ay abaabuleen kafaala-qaadaha kooxdaada" (Wadanka [Col.] 29.7.97); "Waxqabadka waxaa kafaala qaaday Wasaaradda Dhaqanka, Dhalinyarada iyo Ciyaaraha" (Nación [C. Rica] 17.3.97); "Si aan micno lahayn ayay ahaayeen dadaalladii lagu doonayay in lagu helo kafaala-soo-saare kaamerooyinka iyo rikoodhada" (Dolina Ángel [Arg. 1993]).
Xigasho: Qaamuuska Pan-Hispanic ee Shaki. http://www.rae.es/dpd/
Ku jawaab Carlos-Xfce
Labada midba kan kale ayaa ansax ah mana ahan sabab wadahadal, u adeegsada golayaasha luuqada taas.
0.0 iigu yeedhaa jaahil ... Waan fahmay qaybta ku saabsan tabarucaada qalabka laakiin ... Isbaanishka, sidee ayey uga faa'iideysaa Debian? waa kala fogtahay ma fahmin hehehe
Taas oo ay ku deeqayaan server-yada loogu talagalay kaabayaasha Debian. Kala soocid ka wanaagsan oo ku jirta dib-u-habeyn, xawaare dheeri ah oo lagu shaqeynayo si loo dhiso xirmooyinka, distro kasta waxay leedahay tiro badan oo server ah oo loogu talagalay shaqooyin kala duwan.
oh ... mahadsanid 😀
Ujeedada ugu weyn ee dulqaad la'aanta iyadoo la helayo adeegyo ku meel gaadh ah juquraafi ahaan meel ka duwan laguna daro awood badan oo keyd ah.
Jawaab carlos andres
Kufiican Debian. Tan iyo intaan ku jirno, goormuu yahay Debian 7?
Maaddaama ay leeyihiin adeegeyaal cusub, waji u sameynta bogga rasmiga ah ma dhaawici karin.
Haddii wax walboo hagaagaan, waxaan u maleynayaa inaan si rasmi ah ugu dhawaaqi doono 2 toddobaad gudahood. 50 cayayaanka ama qaddar la mid ah ayaa weli harsan si loo saxo. Waxaan la socday iyada oo lagu rakibay shebekad netinstall ah oo la isticmaalayo tan iyo bishii Diseembar wax dhibaato ahna kuma qabin.
Ku jawaab Ruffus-
Waxaan eegay hadda: 38 cayayaan ayaa la helay !!
Waa run, waa sida bogga PHP, muxuu yahay bog xun, laakiin weli, waa luuqadda webka ee ugu isticmaalka badan.
In kasta oo bogga PHP uu yahay "mid laga naxo", haddana si wanaagsan ayuu u qabtaa shaqadiisa. Mar kasta oo aan raadinayo hawl, waxaan helayaa markii iigu horreysay. Wax walbana si wanaagsan ayaa loo diiwaangeliyaa. Waxaan jeclaan lahaa luqadaha kale ee barnaamijyada inay la mid noqdaan bogga PHP.
Sidoo kale PHP ma ahan naqshadeynta. Qaabeynta waa CSS.
Sponsori waa maxay Malaha waa sida google u tarjumay. Waxaa jira ereyo badan oo ku jira afkeenna quruxda badan si loo isku dayo in ereyga looga beddelo Ingiriisiga. Taasi miyaanay kaaga fiicnayn adiga: taageerid, kafaalaqaad, dhiirrigelin, dhiirigelin? Sikastaba, Internerku waa bilaash ...
Ku jawaab faallooyinka
Wax ku biir layaableh, waxaan jeclaan lahaa inay jiraan shirkado badan oo doonaya inay kafaala qaadaan debian.
Ma jiraa qof og haddii Debian 7 soo baxo sanadkan?
Waxay umuuqataa inay jiraan cayayaanno aad uyar oo haray si loo hagaajiyo (50 ayaa harsan sida uu sheegayo @ Ruffus- halkaas ka faallo).
Ka jawaab cookie
Waxaan rajeynayaa inay dhaqso u soo baxdo 🙂
GDayaanna ( dijo
Maqla! Maxay yihiin tabaruc wanaagsan oo ay sameeyeen, tiro aad u tiro badan, waxaan rajeyneynaa in shirkado badan ay sidaas oo kale sameyn doonaan, maxaa yeelay marka laga reebo wada-hawlgalayaasha, lacag iyo qalab ayaa loo baahan yahay si loo ilaaliyo horumarinta mashaariicda.
Jawaab Yohan Graterol (@yograterol)
Laakiin iyagu waa adeegeyaal duug ah ... garbaha iyo qafisyada iyo xafiisyada munaaradaha waxay ku galaan serverka G8 sidoo kale MSA2000 waa qalab duug ah (midka ugu dambeeya waa P2000 G3 waana 3 sano ka hor).
Si lama filaan ah qorshaha taageerada damaanad qaadka ayaa ka qaalisan.
Maadaama ay jiraan dad badan oo papists ah marka loo eego Pope ka, jooji dhajinta oo aqri kaliya. Halkan waxaa ku jira waxyaabo aad u wanaagsan.
Aan aragno haddii ay ku dhawaaqayaan Debian 7 oo aan awood u leeyahay inaan ku dhejiyo Nvidia, maxaa Xfce ku keenaya asal ahaan? Waxaan xiiseynayaa Darktable-kii ugu dambeeyay 1.2… uhm, mar hore ayaan u xiiseyneynaa PPA….
Ku soo jawaab RafaGCG
Waxay umuuqataa mid hagaagsan
PS: yaa daneeya waxa ay RAE leedahay. Qor sida aad rabto
Ku jawaab Franco
Tan "sidaad jeceshahay u qor" waa jaahil. Waa inay isku daydaa inay kobciso afkaaga, maxaa yeelay haddii kale qof kale ayaa ku caburin kara.
anti rae dijo
RAE maahan hay'ad, haddii aad fiiro gaar ah u yeelato, waa ikhtiyaarkaaga xorta ah iyo sababta aad u rabto, laakiin ma mataleyso maamul ka baxsan xaqiiqda ah in dadku rabaan inay fiiro gaar ah u yeeshaan JAAHIL dartiis.
Si qoto dheer ayaan u diidanahay go'aanada RAE, intaas ka sokow in aysan aniga matalin wax awood ah aniga.
Ku jawaab jawaab
RAE SI WAA hay'adda sharciga ugu sareysa ee mas'uul ka ah luuqada Isbaanishka.
In isbeddeladii ugu dambeeyay ee uu soo saaray loo arko inay yihiin BURRADA iyo gabi ahaanba ISBADHAGA luuqadda oo aan hoos u dhigaynin sharcinimada xubinta.
Waxaan ku raacsanahay inay tahay wax laga xishoodo inay aqbaleen qalooca dadka ku hadla luuqada Isbaanishka ee Mareykanka inay yihiin "diiwaangelin" marka ereyga saxda ah ee waligiis jiray uu yahay "diiwaangelin" iyo wax la mid ah, laakiin nasiib daro wali waa hay'adda rasmiga ah ee xukunta afkeena.
Ku jawaab msx
Sarkaalka yaa leh? Dadka Isbaanishka?
Nasiib wanaag waxaan ku noolahay Ameerika, halkanna malahan dowladnimo iyo amar.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, qofna (xitaa Isbaanishku) kuma qasbana inuu u soo gudbiyo RAE, qof kasta oo sidaas sameeya wuxuu ku sameeyaa rabitaankiisa xorta ah.
Waxaa laga yaabaa in berrito deriskaaga uu yeelan doono akadeemiyadiisa luuqada oo dadku ay ka doorbidi doonaan akadeemiyadaas tan RAE. "Sharci ahaanta" RAE-da ayaa gebi ahaanba caqli-gal ah.
RAE-na waxay oran kartaa kun shay, laakiin hadaan dadku dheg jalaq u siin, awoodeeda mala-awaalka ah iyo sharciyadeeduba wax yar ayey iska yihiin.
Taasi dadku way iska indhatirayaan, kama qaadayso rae, awoodeeda, waxay la mid tahay dawladaha, waad iska indha tiri kartaa, laakiin haddii sharci sheegayo inuu pio yahay, waa pio, markaa waxaad samayn karto waxaad rabto. Arrinta kale waxay tahay inay ila muuqato inaan aad u fashilmay in ka soo jeedka Isbaanishku doonayo inuu u sheego Isbaanishka waxa saxda ah.
Nabad iyo jamhuuriyad.
sxb wanaagsan, aan taa kaga tagno, hadaad rabto inaad uhogaarto maamul khayaali ah waa dhibaatadaada.
PS: Afku waa sidaan aniguba u leeyahay sida kaaga; oo waligay iskuma dayin inaan sheego waxa saxda ah, waxaan kaliya tilmaamay in RAE aysan lahayn awood dhaafsiisan dadka si iskood ah u go’aansaday inay dhageystaan.
Dabcan…, waxkastoo aad rabto, markaa maadaama ay tahay awood mala awaal ah, qaado imtixaan aad ugu qoraysid Castilian-ka sida aad rabto, ka dib ii sheeg waxa natiijadu ahayd…. Waa inay si fiican u socotaa sax? Labadan noole awood uma laha inay sheegaan sida wax loo qoro ama si fiican loogu hadlo: D (birta)
“Tan kale waxay tahay waxay ila tahay inaan aad u fashilmay in waxyaabaha laga keenay Castilian, la doonayo in loo sheego Castilian waxa saxda ah.”
+1 labada faallooyin.
eta vien, ke kada one ezcriva komo isagu wuu jecel yahay, hah ci todoz noz understandmoz 🙂
Marka laga hadlayo wararka, inkasta oo aanan isticmaalin Debian muddo dheer, waxaan la socdaa Arch iyo openSuse, waan ku faraxsanahay iyaga, qaybintaan weyn waxay uqalmeysaa tan iyo inbadan.
Ku jawaab Carroca
ok taageere RAE, si aad u aqriso qaamuuska oo aad u isticmaasho guul ****
Waa maxay warka wanaagsan ee aan jeclahay Debian, waxaan hayaa labo NAS oo it ah
Aan aragno caruur, horey ayaan u saxay ereyga yar .. 😛
Raaxo aad u weyn oo Debian ah si ay u hesho deeq intaas le'eg!
Laakiin Debian waa u qalantaa intaas iyo in ka badan, waa jahwareer la ilaaliyay!
Jidkaas ku hayso ..
Qoraal farxad leh, ur.
Ugu dambeyntiina adduunku wuxuu u weecanayaa dhanka hanti-wadaagga adag, maxaa qurux ah.
Weyn Waa wax lagu farxo in la helo noocyada noocaas ah ee qiimeeya dadaalka Debian si uu u noqdo midka ugu muhiimsan ee bulshada ka dhex shaqeeya Linux.
Qaddarinta aan u hayo beeshan, iyo sidoo kale inaan ku faano inaan u adeegsaday Iceweasel 20 on my Debian Squeeze.
... Waxaan u maleynayaa in server-yada ay u isticmaali doonaan nidaam halis ah, HP-UX tusaale ahaan ...
[..] encerio […] —————-> maxaa il xun
HP UX waxaa loogu talagalay processor-ka Intel itanium. Laakiin dabcan nidaam "qatar ah" ayaa la isticmaali doonaa, DEBIAN ayaa la isticmaali doonaa!
war wanaagsan. si aad u wanaagsan
Sabayon iyo qgtkstyle
Ku dar xoogaa shaqeyn dheeri ah Firefox wixii ku saabsan: config